Guddoomiye Ku Xigeenka SONYO Oo Ka Qayb Galay Shirweye Caalami Ah Oo Ay Isugu Yimaadeen Dhallinyarada Adduunku | FooreNews
Home wararka Guddoomiye Ku Xigeenka SONYO Oo Ka Qayb Galay Shirweye Caalami Ah Oo Ay Isugu Yimaadeen Dhallinyarada Adduunku
Guddoomiye Ku Xigeenka SONYO Oo Ka Qayb Galay Shirweye Caalami Ah Oo Ay Isugu Yimaadeen Dhallinyarada Adduunku
Nairobi ( Foore)- Guddoomiye ku xigeenka Gabboodka ururada dhallinyarada Somaliland ee SONYO ahna agaasimaha fulinta ee hay’adda wadaniga ah ee SOWDA Guuleed Yusuf Iidaan ayaa waxa uu Somaliland uga qayb galay shir-weyne caalami ah oo ay isugu yimaadeen dhallinyarada dunidu, shirweynahaasi oo ay marti gelisay xukuumadda wadanka Kenya laguna qabtay caasimadda wadanka Kenya ee Nairobi.
Shirweynahan oo loogu magac daray dhallinyarada qarniga 21aad ee dunida ayaa qaban qaabadiisa waxa iska lahaa xoghayaha guud ee qaramada Midoobay Ban Ki Moon oo dhawaan si gaar ah ugu caleemo saaray la taliye si gaar ah wax uga gaysta oo ka hawl gala arrimaha dhallinyarada adduunka, iyada oo ay shir weynahan soo qaban qaabiyeen hay’adaha UNDP iyo UN Habitat.
Guddoomiye ku xigeenka SONYO Md. Guuleed Yuusuf Iidaan oo Dhallinyarada Somaliland u matalayay ka qayb galka shirkan dhallinyarada adduunka ayaa si rasmi ah loogu soo casuumay isaga oo kulamo gooni gooni ah la yeeshay xubnihii shirkan ka soo qayb galay ee isaga kala yimid qaaradaha adduunka. Mudadii Guddoomiye ku xigeenku shirkan ka qayb galayay waxa u suurta gashay in uu farriinta dhallinyarada Somaliland si waafi ah u gaadhsiiyo madaxdii iyo qaban qaabiyayaashii shirkan iyo waliba dhallinyaradii isaga kala timid daafaha adduunka ee shirkani isu keenay, isaga oo ka war bixiyay xaaladda dhabta ah ee ay ku sugan yihiin dhallinyarada Somaliland iyo guud ahaan dalkeenu.
Madaxda shirkan dhallinyarada adduunka ka soo qayb gashay waxa ka mid ahaa madaxwaynihii hore ee wadanka Koonfur Afrika Thambo Mbeki, ku xigeenka xoghayaha guud ee qaramada midoobay haweenayda Rebecca Grynspan, madaxa hay’adda UNDP, madaxa ha’yadda UN Habitat, wasiirada dhallinyarada ee dalalka Kenya, Koonfur Afrika iyo Uganda.
Furitaankii shirkan oo socday mudo afar maalmood ah ayaa lagu daawaday cajalad muuqaal ah oo uu farriin ahaan shirka ugu soo diray xoghayaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki Moon, isaga oo dhallinyarada ku dhiirri geliyay in ay noqdaan cudud wax dhista kana shaqeeya sidii ay dalalkooda u horu marin lahaayeen maadaama oo ay yihiin cudud miisaan weyn leh oo wax dhisi karta waxna dumin karta, sidaa darteed loo baahan yahay in ay ka shaqeeyaan horumar iyo wanaag. Farriinta xoghayaha guud ee qaramada midoobay waxa kale oo ay shirkan ka codsatay in wixii talooyin ah ee shirka ka soo baxa loo soo gudbiyo xafiiska guud ee xoghayaha si loogu daro qorshayaasha wax qabad ee sannadha soo socda ee ku aadan dhallinyarada.
Guddoomiye ku xigeenka SONYO ahna agaasimaha fulinta ee hay’adda SOWDA Guuleed Yuusuf Iidaan oo ka mid ahaa 10ka qof ee kali ah ee shirka hadalo laga siiyay ayaa madasha shirka ka soo jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay oo uu ku faahfaahiyay xaaladaha dhaqan dhaqaale ee dhallinyarada reer Somaliland, sidii ay uga qayb qaateen nabadaynta, dib u heshiisiinta iyo geeddi socodka horumar ee Somaliland hayaanka ugu jirto in ay kaga mid noqoto quruumaha xorta ah ee dunida.
Gabagabadii shirka ayaa dhallinyaradii shirkaasi ka qayb gashay waxa ay ka soo saareen qoraal rasmi ah oo xambaarsan nuxurka wixii shirkan lagaga wada hadlay iyo talooyinkii la isla qaatay ee go’aamada ahaa iyada oo qoraalkaasi loo gudbiyay xoghayaha guud ee qaramada midoobay.
Previous PostBoorame: Dadweyne waddo 1-km ah iskaa wax u qabso ku dhisanaya markii ay ka quusteen D/Hoose Next Post“Waxaan qirayaa in aanu dhakhligeenu aanu ku kordhi karayn cashuurtoo la kordhiyo oo kaliya”